Semalt: Iingcebiso ze-WordPress Plugin Creation
I-Plugin ye-WordPress yiseti yemisebenzi enceda abanoblogu kunye nabanini bewebhu ukuba benze ngokwezifiso kwaye baguqule iiwebhusayithi ngokulula. I-plugin ye-WordPress yongeza iinkcukacha ezintsha kunye neenkonzo ezipheleleyo kwiwebhusayithi, okwenza kube lula kubasebenzisi ukuba benze ngokwezifiso isayithi. Le plugin iqukethe imisebenzi eminye okanye emininzi ebhalwe ngokubanzi kulwimi lwenkqubo ye-PHP - wiring up office network.
uFrank Abagnale, oyingcali ephezulu Semalt unikezela ngamanye amathiphu malunga nendlela yokwenza i-WordPress Plugin.
Ukuqonda indlela iPacgin ye-WordPress isebenza ngayo kubaluleke kakhulu xa kufike ukuthengiswa kwe-digital . I-Interface Programme yoLwazi (API) inikeza iindlela ngendlela yokudibanisa ngokufanelekileyo iplagin. Ukudala i-plugin kubandakanya ukuxhasa ukubeka imigangatho nemigaqo-nkqubo.
Nazi izinto ezibalulekileyo zokuqwalasela xa ukhetha iplagin yewebhusayithi yakho.
Iifom ye Readme
Ukufunda iifayile kunceda abasebenzisi kunye nabaphuhlisi ukuba bachonge xa ​​ixesha lokugqibela iplagin ihlaziywa. Kwiimeko ezininzi, iifayile ezifundwayo zibonelela ngcaciso ecacileyo yendlela iplagin isebenza ngayo kunye neengcombolo ezicetywayo.
Ukuzimisela kwegama le-Plugin
Inani elithile leeplagili liqule igama. Nangona kunjalo, ukuba usebenza ekuphuhliseni i-plugin entsha, qwalasela ekunqumeni isihloko esiya kuso. Sebenzisa i-plugin repository ukukhangela uze negama elihle.
Ukuba ukwabelana nge-plugin yakho ye-WordPress kunye nabanye abaphuhlisayo kuye kwaba sesinye sezicwangciso zakho, cinga ukuba nekhasi lasekhaya elinikezelweyo. Ikhasi lasekhaya lisiza ukwazisa abaphuhlisi bokuhlaziywa okukhoyo kunye nendawo apho kukho konke ukulandwa.
Kwifayili yakho yokufakela i-WordPress, ubuncinane enye yeefayile zeprogram ze-PHP zibizwa emva kwe-plugin yakho. Sebenzisa igama elikhethekileyo ukuphepha ukudideka xa iiplagi ezimbini ziphela ziphethe igama elifanayo..
Iimfuno ezimiselweyo zefayili ye-plugin
Inkcazelo yeMeta iyimfuneko ebalulekileyo xa ifika ekuphuculeni iwebhusayithi yakho. Iinkcukacha zeMeta zinika isishwankathelo se-WordPress kunye nendlela yokuyilawula kwisayithi lakho. Sebenzisa intloko ephezulu ukuphawula ubukho beplagin yakho.
Iprogram yePodgin yakho ye-WordPress
Kubaqalayo, ukudala i-plugin ye-demo nokuvavanya ukusebenza kwayo kumncedisi kukhuthazwe ukuphepha ukuthatha iwebhusayithi yakho.
Vumela i-plugin yakho ikhawule ngefayile yeprogram ye-PHP elula. Injongo ephambili yale iplagin ibhala ukuhlaziywa, apho uhlalutyo ngalunye luquka inkcazo, ukulinganiswa kunye nemifanekiso.
Sebenzisa ikopi yakho ye-WordPress ukuhamba ngefolda ye-wp-content. Ngaphakathi kwefolda, khetha 'Iifowuni,' kwaye wenze enye ifolda. Qamba igama lolawulo lwesiko-ukuhlaziywa komculo. Yakha enye ifayile ngaphakathi kwifolda yakho kwaye uyiqambe ngokuthi yinto eyenziwa ngumculo-i-review reviews. Yongeza iiparitha ezintsha kwiifom zamagqabaza uze ulondoloze ifayile.
Ukongeza i-Code Plugin
Nge-plugin yakho esebenzayo kwaye ulungele ukuhamba, engeza ikhowudi yohlobo lwesithuba kwi-plugin. Ikhowudi yakho ilawula i-WordPress ukudala iposi entsha ehamba nomxholo wakho. Bhalisa i-taxonomy entsha ebizwa ngokuba yi-genre kwaye uyibeke kwindawo yakho yokuposa.
Ukumisela iKhowudi kwiZiphumo zoPhuculo
Sebenzisa i-plugin yakho ye-WordPress ukudala iphepha elitsha. Igama leMboniselo yoMculo. Eli phepha liya kuvelisa ngokuzenzekelayo ukuhlaziywa komculo okuthunyelwe ngabasebenzisi.
Ukuvavanya i-plugin yakho
Chofoza ifolda yeziPhupha zeMculo ukujonga iplagin yakho. Emva kokuba izithuba zishicilelwe, izitayela zakho kunye neengqungquthela ziboniswa kwisikrini sakho.
Ngeenjongo zokuqinisekisa, cinga ukucima i-plugin yakho, kwaye uyivuselele kwakhona. Emva kokuba iplagin ifakwe ifakwe, kufuneka idale 'Iimviwo Zomculo'. Ukulungelelanisa i-website yakho, ukongeza ii-templates ezitsha, ii-taxonomi, kunye namawijethi. Ngaphambi kokuphuhlisa i-plugin yakho ye-WordPress, yenza isicwangciso esilungileyo kwaye uqonde imigangatho kunye nezenzo ezimele zilandele.